Literary Tourism: Mahoridhe munzvimbo dzemabhuku ako aunofarira. | Zvazvino Zvinyorwa
Literary Tourism: Novel zororo.
Ana Lena Rivera Munoz | | Noticias
Dubrovnik: Kuti unzwe kunge mumwe wevanopokana veMutambo weZigaro.
Zvinyorwa zvekushanya zviri mumafashoni. Iko kupihwa kwekudzokorodza marongero enhau ako aunofarira kuri kukura. Kubva kune inozivikanwa uye terevhizheni saga ye Mutambo weZigaro, iyo yatinogona kufamba nayo chikamu chikuru cheIreland, Dubrovnik, Seville nedzimwe nzvimbo kuenda kumigwagwa yeLondon ichitevera tsoka dzaSherlock Holmes, uko Museum yakagadzirwa mukero yakagara imba yake: Baker Street 221b, kero iyo hakuna kuvapo apo Conan Doyle akapa hupenyu kune mutikitivha ane mukurumbira.
Pfungwa iyi yakabudirira: Pasika yapfuura iyi, iyo Baztán Valley, nzvimbo isingazivikanwe nevazhinji kusvika Dolores Redondo atangisa iyo mukurumbira pamaoko emutikitivha Amaia Salazar, awana basa rakazara, nekuda kwevaverengi vemukundi wePlaneta Award .
1 Chii chakaita kushanya kwekunyora?
2 Bookmeup hurukuro
3 Uye kana chinhu chedu chiri chekuenda nenzira yedu ...
Chii chakaita kushanya kwekunyora?
Masuwa kujoina iyo bandwagon yemafambiro uye nzira dzevashanyi dzinotanga kuve dzakarongedzwa kutenderedza enoveli akaiswa munzvimbo yavo, nyaya uko nharaunda inova imwe yeanopokana. Beyond the classic routes through Castilla la Mancha following in the footstakes of Don Quixote, almost ten years ago, Vigo akaronga nzira yevashanyi mumakwara e Leo Caldas, mutikitivha akagadzirwa na Sunday Villar, iyo mushure mezvikamu zviviri, yakanyangarika ichisiya vaverengi vachida zvimwe. Nhasi tinogona kushanyira Valladolid zvichitevera zviitiko zve Mori nguva de Cesar Perez Guellida o Vitoria Gastéiz , Kufamba mumigwagwa umo hunyengeri hwe "Runyararo rweGuta Rakachena" naEva Gª Sáenz de Urturi.
Iyo yazvino maitiro ndeyekuti ivo vanyori ivo pachavo vanoita sevatungamiriri.. Ichi ndicho chirevo chikuru chemugwagwa wakarongedzwa ne guta horo ye Sevilla, kufamba mumigwagwa yeguta takabatana nemunyori Eva Diaz Perez, munyori we Ruvara rweNgirozi.
vamwe vanyori, senge Eloy Moreno, vanozvironga pachavo, panguva yakakodzera maererano nehurongwa hwavo inovabvumira.
MuSpain, chinyorwa chekushanya bhizinesi chirongwa, Bookmeup, yakavhurwa nevadzidzi vaviri vechidiki veyunivhesiti, vadzidzi veADE, Gemma Bosch naMar Javier vagamuchira iyo mubairo weakanakisa mabhizimusi ekutanga eYUZZ Center yeYunivhesiti yeValencia. Musiyano ndewekuti kupihwa kunoenda kupfuura nzira yevashanyi kuburikidza nezviono zvemanoveli.
Nzira kuburikidza neValencia inotevera zviitiko zvesaga yeValeria naElizabeth Benavent.
Actualidad Literatura yataura naGemma naMar, vagadziri veBhukumeup uye izvi ndizvo zvavanotiudza nezve chirongwa chavo:
KU: Bookmeup Ndiro rako rekutanga bhizinesi chirongwa kana iwe uchiri muyunivhesiti danho uye naro unogamuchira mubairo weakanakisa muzvinabhizimusi kubva kuYUZZ Center yeYunivhesiti yeValencia. Wakafunga here kuti chimwe chinhu chakadai chichaitika pawakatanga kuvaka Bookmeup?
BookmeUp: Kwete napaduku pose, tingadai tisina kumbofungidzira kusvika kwatave kusvika. Pakutanga, yaingova pfungwa yeshamwari mbiri dzinogovana rudo rwekuverenga uye isu takangozvisiya isu tichienda. Chokwadi ndechekuti, chave chiitiko chakasarudzika matakadzidza zvinhu zvakawanda, uye tinodada nezvose zvatiri kuvaka.
KU: Chii chinonzi Bookmeup chinopa? Kune vafambi vane kuravira kwekuverenga kana kukurudzira vaverengi vane usimbe kuti vabude mumba?
BookmeUp: Bookmeup ibasa uko muverengi anogona kubhuka mumaresitorendi uko avo vavanofarira vanodya, kurodha mimhanzi yavanoteerera, kuenda kunotenga kubva kune mawebhusaiti ezvitoro kwavanozviitira, uye kuenda kunzvimbo dzinoitirwa nyaya dzavo. ; kukwanisa kugovana zvese izvi nevamwe vashandisi.
Chaizvoizvo kune ese ari maviri, sezvo kune rumwe rutivi kune vanoda kuverenga chichava chikuva chavanogona kunakidzwa nezvese zvakakomberedza bhuku ravo ravanofarira uye kurarama nyaya seye protagonist iye.
Kune rimwe divi, isu tinotenda kuti chingave chinhu chikuru chekukurudzira kukurudzira kuverenga, pamwe neicho kushanya. Tinotoda kugadzira nzira yakanangana nekuverenga kwevana muzvikoro, zvekuti inomira kuve chisungo chevana uye inova chinokwezva, ichikwanisa kufamba gare gare kunzvimbo dzinoitika nhoroondo. Inogona kunge iri nzira itsva uye dzakasiyana yekusvika vana kuburikidza nekuverenga.
AL: Zviitiko zvitanhatu zvekufamba zvekutanga, Valencia, Madrid, Tangier, Edinburgh kana Baztán, zvichitevera Megan Maxwell, Elisabet Benavent, Dolores Redondo, María Dueñas naElena Montagud. Wakauya sei pasarudzo iyi? Vanyori vese, vakatarisa kune vateereri vechikadzi? Mutambo wechigaro cheChigaro uripi?
Pakutanga, isu takaganhurira musika kune yerudo uye yenhoroondo genre, nekuti aya marudzi emabhuku ari nyore kubata kurarama chiitiko. Mushure mekubuda kumigwagwa kuti tiongorore, takapesana nemaonero eruzhinji nekutinakidzwa nekuverenga uye nemabhuku anogona kuumba chiitiko ichi, uye ndiwo mabatiro atakavasarudza.
AL: Chii chatichakwanisa kuwana muBhukumeup gore kubva ikozvino?
BookmeUp: Isu tinovimba kuti mukati megore iyo app ichave yakagadzirira kurodha neese mashandiro akagadzirira uye nemhando dzakasiyana siyana dzemabhuku akaiswa, kwete aya chete atinawo izvozvi, kuti vaverengi vese vafarire ruzivo rwekuverenga.
Kubva kuActualidad Literatura tinoshuvira Bookmeup budiriro yakawanda uye tinovimba kuti gore rega rega kupihwa kwacho kwakakura uye tinogona kunakidzwa nematanho ese makuru anoisa zvinyorwa zveSpanish.
Uye kana chinhu chedu chiri chekuenda nenzira yedu ...
Icho chinyorwa chevashanyi chinopa chinotanga kuve chakafara uye chakasiyana. Kunyangwe zvakadaro, parizvino, haatombotora kuwanda kukuru kwevashanyi vachitsvaga marongero enhau dzaanofarira. Vazhinji vachiri kuronga nzira dzavo, nerubatsiro, hongu, rwe mamwe mawebhusaiti anowedzera anobatsira vashanyi vakazvimirira kuti vagadzire marwendo avo kuburikidza nemigwagwa yakanyanyisa yekuSpanish neEuropean geography.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Literary Tourism: Novel zororo.
Akanakisa mabhuku evana nevechidiki
Mabhuku akanakisa echikadzi akambo